धरान। गायक भत्तिराज राई जो भोजपुरको वासिखोरामा जन्मेर अहिले धरानलाई कर्मथलो बनाएर लामो समयदेखी बस्दै आएका छन । उनी प्रदेश १ कै एक प्रतिष्ठित गायक समेत रहेका छन । हुन त उनी गायकी क्षेत्रमा मात्रै उदाएका भने होईन । उनले धरानमा रहेर विगत बर्षदेखी पुर्वान्चल सिङ्गिङ स्टार र मिस स्टेट वान नामकको ब्युटी प्याजन समेत सन्चालन गर्दै आएका छन । उनले यी दुई कार्यक्रम मार्फत धेरै कलाकारहरु जन्माईसकेका छन ।
धेरै नव प्रतिभाहरुलाई शिखरको चुचुरोतर्फ दोहोर्याउने काम समेत उनले गरेका छन । सानै उमेरदेखी सङ्गितप्रती लगाब राखेका भत्तिराज राईले सङ्गीत सिक्ने र आफ्नो अध्ययन पूरा गर्ने शिलशिलामा धेरै ठाउँको बसाई सङ्गै जिवनमा अनेकौ उताढ चढाव सङ्ग सामना गर्नुपरेको थियो । संघर्षकै क्रममा उनी आफ्नो लक्ष्यलाई पछयाउदै भोजपुरदेखी २०६३ सालमा सुनसरी आएका थिए । उनले आफ्नो आधा अध्यययन गाउँ भोजपुरमै गरे र बाकी सुनसरीमा आएर पूरा गरे । अध्ययनकै क्रममा उ भ्वाईस अफ टिन नामकको रियालिटी शो मा पहिलोपटक सहभागी भए ।
त्यसबेला उ मात्र १७ बर्षको थिए । उनले धरानबाट अडिशन दिए र अडिशनबाट छनौट समेत भए । छनौट ४८ जनामध्येको समुहमा उनको नाम समेत पर्न सफल भयो । त्यसपछि उनको सङ्गितिक यात्राले भने तिब्रता लियो । सङ्गितकै यात्राको क्रममा उनी काठमाडौ पसे । काठमाडौको बसाईमा २ बर्षको समयलाई उनले सङ्गितमै व्यत्तित गरे । आफै संघर्ष गर्दै आफ्नो अध्ययन र सङ्गीत यात्रालाई निरन्तरता दिए । २ बर्षको बसाईपछी पोखरा गए र उनी त्याहा पनि ६ महिना बसे । त्यहा बस्दा बस्दै धेरै सङ्गितकर्मी,कलाकारहरुसङ्ग घुलमिल भए । त्यसै क्रममा साङ्गितिक कार्यक्रमकै लागि मनाङ,मुस्ताङ,जोमसोम सम्म समेत पुगे त्यहा पनि १ महिना बसे र त्यसपछी उनी २०६७ सालतिर धरान आएर बस्न थाले ।
धरान आएपश्चात एल्बम गर्न साथिहरुको सल्लाहमा पहिलोपटक यस्तै हुन्छ पिरती नामकको एल्बम उनले निकालेका थिए । त्यसपछी धेरै गितहरुमा समेत उनले स्वर दिए , गितहरु गाए १ त्यो समयमा धरानमा भनेजस्तो राम्रो सङ्गीत शिक्षा दिने स्कुल थिएन । त्यसैले उनले धरानमा एउटा व्यवस्थित सङ्गीत कक्षा खोल्ने निर्णय गरे र २०६९ सालमा पुर्वान्चल बागिना कला केन्द्र नामको सस्था दर्ता समेत गरे । त्यसपछी उनले सङ्गीत स्कुल सन्चालन गर्न सुरु गरे ।
त्यसै क्रममा उनले पुर्वान्चलभित्र लुकेर बसेका प्रतिभाहरुलाई खोजेर निकाल्ने उदेश्यले २०६९ सालदेखि पुर्वान्चल सिङ्गिङ स्टार प्रारम्भ गरे । उनले सिङ्गिङ स्टारलाई निरन्तरता दिए । त्यसपछी २०७५ सालदेखी शुन्दरता स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य जिउनको लागि नाराका साथ मिस स्टेट वान नामकको ब्युटि प्याजनको सुरुवात गरे । अहिले पनि तिनै कार्यक्रमहरुलाई उनले निरन्तरता दिईरहेका छन ।
अहिलेसम्म गायन प्रतियोगिता आठौ सस्करण र शुन्दरी प्रतियोगिता तेस्रो सस्करणमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर यो पटक भने विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको प्रकोपले गर्दा गायन प्रतियोगिता र शुन्दरी प्रतियोगिता दुबैको अडिशनहरु बिचैमा रोकिए । यसै बिषय अन्तर्गत रहेर अबको योजनाहरु सम्बन्धी पुर्वान्चल सिङ्गिङ स्टार र मिस स्टेट वान प्रतियोगिताका संयोजक एवंम गायक भत्तिराज राईसङ्ग औजारले गरेको कुराकानी ।
अहिले दिनहरु कसरी बितिरहेको छ भत्तिराज जि ?
अहिले विश्व्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को बढ्दो प्रकोपका कारण देशका केही क्षेत्रहरुमा लकडाउनमा घोषणा गरिएको छ । कसैलाई पनि घरबाट बाहिर निस्कन दिईएको छैन । म पनि आवश्यक कामाकाज बाहेक घरबाट बाहिर निस्केको छैन । सरकारको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्छ र मैले पनि पालना गरेरै बसेको छु । बढिजसो यो समयमा घरमै बसेर अनलाईन पत्रपत्रिका पढने,देश विदेशका सुचनाहरुबारे जानकारी लिने, नयाँ कुराहरु सिक्ने,गितसङ्गित सुन्ने गुनगुनाउने र समयसमयमा आसपासका छरछिमेक र आफन्तहरुसङ्ग सुरक्षित भएर भेटघाट गर्ने गरेको छु । प्राय मेरो अहिलेको दैनिकी यसरिनै व्यत्तित भइरहेको छ । कहिलेकाही यस्तै तपाईहरुजस्तै मिडियाहरुले बोलाउछन त्यता पनि जान्छु यसरी नै दिनहरु कटिहरुको छ सङ्गितमय नै छ मेरो दैनिकी ।
तपाईको बुझाईमा सङ्गीत के हो ?
सङ्गीत भनेको एउटा नशा हो । सङ्गीत एउटा मात्र त्यस्तो चिज हो जसले दुख परेको मान्छेलाई पनि हसाउने क्षमता राख्दछ र सुखी मान्छेलाई दुखी पनि तुल्याउन सक्छ झन सुखी पनि तुल्याउन सक्छ । सङ्गितमा यस्तोखालको अदभूत शत्ती छ । त्यसैले मानिसले सङ्गितलाई दुख सुखको साथी भनेर पनि परिभाषा दिने गर्छन । म पनि सङ्गितलाई यस्तै यस्तै रुपमा लिने गरेको छु । त्यसैले म सङ्गीत एउटा नशा,यात्री र दुख सुखको साझा चौतारी भनेर पनि मैले भन्ने गरेको छु । वास्तवमा गित सङ्गीत मेरो हरेक नशामा नभएको भए त जिउन गाह्रो नै हुने थियो तर मसङ्ग सङ्गीत छ र त जिउन सकेको छु । त्यसैले म अहिले पनि सधै गितहरु गुनगुनाउछु सुन्छु गित सङ्गितलेनै मेरा प्यास मेटाउछु । म प्राय सबैखाले गितहरु सुन्ने गर्छु र अरु कलाकारहरुलाई पनि आफुले सबैखालका गित सङ्गितहरु सुन्न सुझाव दिन्छु । किनकी सबैको आ आफ्नै विशेषता छ
अहिले कता कता गित सङ्गीतमा विकृतिहरु पनि आईरहेको सुनिन्छ यो बिषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
हो अहिले गित सङ्गितमा नराम्रोसङ्ग बिकृतिको हिलो छेपिएको छ । गित सङ्गितमा छाडापन बढदै गएको छ । म यस्तो विकृती फैलाउनेहरुलाई यस्तो नगर्न सुझाव दिन्छु । यसले अहिले हाम्रो नेपाली गित सङ्गीत जगतलाई तलतिर खसाल्दै ल्याएको छ । आफु चर्चामा आउन जस्तो पाए त्यस्तै उसृङखल खालका गितहरु गाउने अहिले होडबाजी चलेको छ । तर म यसो नगर्न सुझाव दिन्छु । एकजनाको गल्तिले सिङ्गो सङ्गीत जगतलाई बेईज्जत गराउनेछ । त्यसैले पहिला सङ्गीत बुझन पनि आग्रह गर्दैछु । यदि यस्तै गितहरु आईरहे पछि भविष्यमा सङ्गीत लच्किनेछ । अब गित सङ्गितको पनि मापदण्ड नियम हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र गित सङ्गितमा बिकृती फैलाउनेलाई कार्वाहि पनि हुनुपर्छ । र अर्को कुरा गित सङ्गितको मुल जरा भनेकै लोक हो त्यसैले लोकगितलाई पनि नबिर्सिन सबैलाई आग्रह गर्छु ।
लकडाउनले यो पटकको कार्यक्रम र तपाईको दैनिकिलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्यो त ?
यो लकडाउनले पुरै असर पारेको छ । ब्युटी प्याजन र सिङ्गिङ स्टार यी दुई कार्यक्रमहरु सकेर पनि अझ थप दुईवटा कार्यक्रमहरु गर्ने योजना गरेको थिए तर । चैत्रयता भएको लकडाउनले सबै तहसनहस बनाईदियो । दुबै प्रतियोगिताहरु यो पटक गर्न सकिएन । अडिशन सुरु हुदैथियो बिचैमा लकडाउन भयो र कार्यक्रमहरु समेत रोकिए । यो समयमा दुरि कायम गर्नु पर्ने भएकोले गर्दा कार्यक्रमहरु गर्न सम्भव भएन । मलाई लाग्छ मालाई मात्र नभएर सबै कलाकरहरुलाई यो भाईरसले प्रभाव भने पारेको छ । तर प्रभाव पार्यो भन्दैमा दुखी भने छैन यो समयमा थप केही नयाँ कुरा सिक्ने र बुझने अवसर पनि पाए त्यो खुशिको कुरा भयो ।
अहिले सिङ्गिङ स्टार र मिस स्टेट का पुर्व विजेताहरु के के गर्दैछन:
सिङ्गिङ स्टारबाट हामिले २१ जना प्रतिभाहरु जन्माईसकेका छौ । अहिले उनिहरु कोहि सङ्गीत सिकिरहेका छन । कोहि देशबिदेशमा समेत कार्यक्रम गरिरहेका छन । साथै सामाजिक कार्यमा समेत विजेताहरु अग्रसर रहदै आएका छन । हामी आयोजकले बाटो देखाउने हो त्यसै अनुसार विजेताहरुले आफ्नो लक्ष्यलाई पछयाउने हो । ब्युटी प्याजन र गायनतर्फका सबै विजेताहरुलाई हामिले गर्ने प्रत्येक कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउदै आएका छौ । साथै अन्य कार्यक्रममा समेत सहभागिता गराई विभिन्न प्लेटफर्म प्रदान गर्दै आएका छौ ।
बिजेताहरुलाई पुरस्कार के के प्रदान गर्दै आउनुभएको छ ?
सिङ्गिङ तर्फ बिजेतालाई नगद ५० हजार,एउटा म्युजिक भिडियोको ,एउटा गित रेकर्ड,एकथान गितार साथमा एक बर्ष निशुल्क सङ्गीत कक्षाको समेत अवसर प्रदान गर्दै आएका छौ । सिङ्गिङ तर्फकै दोस्रोलाई नगद २५ हजार,एकवटा गित रेकर्ड,एकथान गितार ६ महिने सङ्गीत कक्षा र तेस्रो हुनेलाई नगद १५ हजार एकवटा गित रेकर्ड,तीन महिने सङ्गीत कोर्ष र एकथान गितार उपलब्ध गराउदै आएका छौ । साथै सबटाईटल तर्फ उत्कृष्ट भोकल,अनुशासन,प्रस्तुती,पब्लिक चोइज समेत दिने गरेका छौ । ब्युटी प्याजन तर्फ विजेतालाई स्कुटर,क्राउन,एकवटा म्युजिक भिडियो खेल्ने अवसर,एयरहोस्टेस को स्कलरशिप ,दोस्रोलाई ५० हजार,क्राउन,तेस्रो हुनेलाइ २५ हजार,क्राउन प्रदान गर्दै आएका छौ । साथमा सबटाईटल तर्फ जम्मा १३ बिधामा समेत पुरस्कृत गरिरहेका छौ ।
मिस स्टेट वान र सिङ्गिङ स्टार आयोजना गर्नुको मुल उदेश्य के थियो ?
यी प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्नुको उदेश्य भनेको मुख्यतय त प्रदेश एक भरिमा लुकेर रहेका राम्रा र नया प्रतिभाहरु बाहिर ल्याउनु हो। कत्तिपय ग्रामिण गाउतिर धेरै प्रतिभाहरु छन तर खोजिएको छैन । त्यसरिनै बाहिर नआएका प्रतिभाहरुलाई बाहिर ल्याई मार्गदर्शन गर्न यी दुई कार्यक्रम आयोजना गरेको हु ।
यी कार्यक्रमहरु गर्ने सोच कसरी आयो ?
संघर्ष गर्दा गर्दै मैले आफ्नो संघर्षसिल जीवन भोगाई र लामो अनुभवको कारण मैले गित सङ्गीत गाउदा गाउँदै यी कार्यक्रमहरु गर्ने सोच बनाए । सुरुमा यो सम्बन्धी त्यति ज्ञान नभएर एकदमै गाह्रो भयो । त्योबेला धेरै आरोह अवरोहहरुको सामना गर्नु पर्यो । एक्लै पुर्वान्चलभरिका प्राय जिल्लाहरुमा गइ अडिशन सन्चालन गरे । यसभित्र पनि धेरै संघर्षका कुराहरु छन अहिलेनै सबै नभनौ । एक त पुर्वान्चलमा दिगो र विश्वासिलो गायन शो हरु नभएको कारण पनि मैले पुर्वान्चल सिङ्गिङ स्टार प्रारम्भ गरेको थिए । अझ औसत शो हरु विभिन्न विकट गाउँ बस्तिहरुमा नपुग्ने सिमित ठाउँहरुमा मात्र पुग्ने भएकोले धेरै नया र राम्रा प्रतिभाहरु अवसरबाट बन्चित भए । त्यसैले लुकेर रहेका प्रतिभाहरुको खोजी अभियानसहित यी कार्यक्रमहरु गर्ने सोच बनाए।
यो पटक कोरोना भाईरसको कारण कार्यक्रमहरु हुन सकेन तथापि कार्यक्रमहरु गर्ने नगर्ने योजना के छ त ?
यदि अहिलेको परिस्थितिमा सुधार आउन थालेको खण्डमा लकडाउनका कारण रोकिएका अडिशनहरुलाई निरन्तरता गर्ने योजना बनाएको छु र पुन अडिशन समेत सन्चालन गर्नेछु । जसरी भएपनी अबको सस्करणहरुलाई पूरा गर्नेछु ।र कसरी हुन्छ नयाँ ढङ्गले कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने मेरो तयारी रहेको छ ।
बाकी भविष्यको योजनाहरु चाहिँ के छ त ?
धरानमा एउटा राम्रो र व्यवस्थित सङ्गीत कक्षा र नृत्य कक्षा सन्चालनमा ल्याउने । जसबाट नयाँ प्रतिभा र राम्रो प्रतिभाहरु उत्पादन गर्ने,उनिहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, धरानलाई वास्तवमा सङ्गितको उर्वराभुमी भनेर चिनाउने मेरो अन्तिम चाहाना र भविष्यको योजना पनि हो । स्थानिय बुद्विजिवी,सम्बन्धित निकाय,कलाकारहरुसङ्ग सहकार्य गरि याहाको सङ्गितको बाटोलाई अझ उच्चता प्रदान गर्ने भुमिका खेल्नेछु र गित सङ्गितलाई सधै निरन्तरता दिनेछु ।
अन्त्यमा के शन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त मेरो सम्पुर्ण श्रोतासामु आफुलाई अझ चिनाउने अवसर प्रदान गर्नुहुने औजार दैनिकलाई मनैदेखी धन्यवाद दिन चाहान्छु । र अर्को कुरा के भन्न चाहान्छु भने अहिले लकडाउनको समय छ सरकारको निर्देशनलाई पालना गरौ सबैजना घरैमा बसौ,भाईरससङ्ग लडौ र यसलाई जितौ यसलाई जित्ने एकमात्र उपाय भनेको घरमै बस्नु हो । त्यसैले फेरिपनी सबैलाई घरमै बस्न आग्रह गर्छु । गित सङ्गीत र कलाकारलाई माया गरौ माया गर्न नछोडौ र अन्त्यमा मेरो प्रतिस्पर्धिहरुलाइ समेत आफ्नो तयारी गर्दै गर्नुस भन्न चाहान्छु । म हराएको छैन यतै छु आ आफ्नो समयलाई गित सङ्गितमा बिताउनुस र राम्रो तयारी गर्दै गर्नुस सहज वातावरण भएर आएपछी पुन ग्राण्ड कार्यक्रम गर्नेछु यति भन्न चाहान्छु । धन्यवाद !!!